အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဖြစ်တည်လာဖို့ဆိုတာ နောက်တစ်ခုကကူညီအစဖော်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ စာရေးတဲ့သူရှိတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ သီချင်းရေးတဲ့သူရှိတယ်။ ပါတီတစ်ခုမှာ ပါတီပွဲကျင်းပတဲ့သူရှိပါတယ်! အစပြုဖြစ်တည်လာတဲ့အရာဘာမဆို သူ့မှာဖြစ်လာရခြင်းအကြောင်းတရားရှိပါတယ်။
စကြာဝဠာကြီးကိုစဉ်းစာကြည့်ပါ။ အရင်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက “steady-state”* ဆိုတဲ့ “တည်ငြိမ်အခြေအနေ”သီအိုရီကို လက်ကိုင်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ စကြာဝဠာကြီးဟာ အစမရှိဘဲ သူ့အလိုလို အမြဲတည်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သီအိုရီပါ။
အခု ပထဝီမြေကြီးဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားတွေက “Big bang” (သို့) “မဟာပေါက်ကွဲမှုကြီး” ကို စကြာဝဠာကြီး အစပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြောဆိုကြပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေရာ-အချိန်-ဝတ္ထု-စွမ်းအင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့စကြာဝဠာကြီးမှာ ထူးခြားတဲ့အစပြုခြင်းတစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။
အစကတည်းက အစဉ်တည်ရှိနေခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ (အစတစ်ခုရှိပြီး) ဖြစ်တည်လာခဲ့တာဆိုကတည်းက တခြားတည်ရှိနှင့်ပြီးသားအရာတစ်ခုက ဖြစ်တည်လာစေခဲ့တာ (သို့) ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။
သဘာဝတရားကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာတဲ့အခါမှာ အစဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားကတော့တခြားအရာတွေနဲ့မတူညီတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ််၊ ဖြစ်လည်းဖြစ်ရပါမယ် ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘုရားဟာ သဘာဝတရား၊ လူသားမျိုးနွှယ်၊ အရာခပ်သိမ်းရှိရှိသမျှအရာတွေနဲ့ မတူညီပါဘူး။ သူဟာ အစဉ်အမြဲတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ ဖန်ဆင်းသမျှအရာတွေကနေ မှီခိုမှုကင်းပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ဘာကိုမှ မှီခိုရန် မလိုအပ်ဘဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလပြည့်စုံသော၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလတည်ရှိသောသူဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအရာဟာ ဘုရားသခင်ကို ကျမ်းစာက ဖော်ပြပုံနဲ့ ဘုရားက မိမိကိုယ်ကို ဖွင့်ပြပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဘုရားက အဲဒီလိုပုံစံမျိုး ဖြစ်နေရသလဲ
ကျွန်တော်တို့စကြာဝဠာကြီးကို တခြားနည်းနဲ့ရှင်းပြလို့မရပါဘူး။ သူ့အလိုလိုနဲ့ စကြာဝဌာကြီးက ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး အရင်ကတည်းက သူ့အလိုလို အစဉ်တည်ရှိလာခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဖန်ဆင်းခံအရာတစ်ခုခု ကိုယ်တိုင် ကလည်း သူ့ကိုဖန်ဆင်းနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ?
စကြာဝဠာကြီးကို ဘုရားကဖန်ဆင်းခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီဘုရားကို အခြားဘုရားကဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး ဒုတိယနေရာမှာထားခဲ့တယ်၊ အဲဒီဘုရားကိုလည်း နောက် အခြားဘုရားကဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး တတိယနေရာထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ဟာ ယုတ္တိမဆန်၊ သဘာဝလည်းမကျပါဘူး အရစ္စတိုတယ်လ် အခိုင်အမာသုံးသပ်ခဲ့သလို ကိုယ်တိုင် တစ်ခုခုရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမခံရဘဲ အရာရာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ သူ့အလိုလို ဖြစ်တည်မှုတစ်ခု (သို့မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင် တစ်ခုခုရဲ့ရွေ့လျားစေခြင်းမခံရဘဲ အရာရာကိုရွေ့လျားစေတဲ့ ဖြစ်တည်မှုစွမ်းအင်တစ်ခု) ရှိကိုရှိရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေ များစွာ ယုတ်လျော့နောက်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုရင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရကိုက ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး ဘယ်လိုမှစတင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။၂
(၁) Kenneth Richard Samples; Connections 2007; Quarter 3; www.reasons.org (၂) Ibid.
* ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏ မှတ်ချက် - “Steady-state” သီအိုရီဟူသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်မှ စတင်အသုံးပြုလာသော စကားလုံးဖြစ်ပြီး၊ စကြာဝဠာကြီးသည် သူ့အလိုလို ယခင်ကတည်းက အစဉ်တည်ရှိနေခဲ့ပြီး အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်နေသော ဟိုက်ဒြိုဂျင်အားဖြင့် သူ့ အလိုလို ချဲ့ကားကျယ်ပြန့်လာနေခဲ့သည်ဟူသော နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည်။